izivakashi eziningi Russian ukujabulela aphumula ngosuku zokungcebeleka yaseGrisi. Iningi amaholide ahlale esiqala emihle kuphela mayelana uhambo kuleli zwe elihle unspoilt, kodwa kukhona nalabo ungathandi into. Okusanda wavula okuthunyelwe Izibuyekezo mayelana ehhotela, lapho okade ukhona. Lokhu kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi lezi izivakashi abafuna ukubhuka ehhotela elithile, uyazi ukuthi yini ezokwenzeka, ngokusekelwe hhayi izithombe ezinikeza ezokuvakasha opharetha, futhi amaqiniso angempela. Lesi sihloko presents Izibuyekezo (Greece). Ngemva kokufunda, uzokwazi ukuba ifinyelela eziphethweni zayo, khetha indawo efanelekayo yokubeka ukuphumula ngesisekelo iyiqoqo.
I zokungcebeleka elikhulu laseGreece
The best zokungcebeleka ngesiGreki zitholakala isiqhingi esikhulu kunazo zonke kuleli zwe. Ochwepheshe geography kalula uhlu yibo ezinkulu - Lindos, Kardamena, Chania, Kafelos, njll ethandwa kakhulu resort imizi Greece -. Lokhu Kos, Chalkidiki, Samos, Rhodes Mykonos, neCorfu nabanye.
Sibutsetelo amahhotela e Greece
Izivakashi, abaye bavakashela ngokuphindaphindiwe Turkey, bazi ukuthi amahhotela YesiGreki sihluke nomunye hhayi izinkanyezi, kodwa by isigaba. Ihhotela asemazingeni ulinganiswa yesigaba Delux, 4 izinkanyezi - isigaba A, lezinkanyezi ezingu-3 - isigaba B, 2-Star - esigabeni C Amahhotela B no-C Site izivakashi abakhetha iholidi indawo. Ziyakwazi ngokuvamile encane, ethokomele futhi ihlanzekile. Ezindaweni ezinjalo kukhona konke ababekudinga ukuze ephilayo ukhululekile - .. Air conditioning, ithelevishini, eshaweni, njll Izibuyekezo Greece eshiya zonke ezinye izivakashi, ngemva kokufunda kubo, ungakwazi ukuthola izigaba ehhotela kalula.
Amahhotela asemabhishi Amahhotela ezindawo hhayi eliphansi in izinga kuya abanye. Ogwini ungahlala njengoba Deluxe okunethezeka ehhotela, futhi ngendlela elula isigaba ihhotela B - "ruble ezintathu."
Isekelwe kwelinye ihhotela nge disco intsha, singalindela ukuthi ezinsukwini ezizayo nakanjani sibe yokudlela omkhulu cuisine kazwelonke, noma epaki amanzi. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana namahhotela zokungcebeleka Greece edume ingafundwa ngezansi.
Rhodes Isiqhingi njengoba eholidini abakhethiwe yizivakashi, lowo esilindele we sezulu emnandi futhi zikhululekile iMedithera. Ilanga likhanyisela cishe unyaka wonke, ngakho-ke ngokuvamile kusukela Russian Rhodes abandayo ukufihla bakithi. Njengoba amahhotela, kukhona okuningi kubo. Okuvame kakhulu ehhotela 4 no-5 izinkanyezi, ngakho resort amaningi okuthi khona izivakashi abami kahle. Yebo zikhona amahhotela isihambi isabelomali, kodwa isibalo sabo sincane kakhulu. Izikhungo kanye nokugcinwa amahhotela ziphezulu, ikakhulukazi ukwamukela lapha ukwamukela izivakashi ezivela eRussia. Ukubuyekezwa (Greece) njalo agcwaliswa nge esiqala emihle abantu bakithi abayibekile weneliseka umsebenzi umhlahlandlela nehhotela abasebenzi-Russian ukukhuluma.
Ukuze iholidi lomkhaya kungcono ukuya Faliraki Lardos noma Lakhani. The best zingabizwa ngokuthi amahhotela Lindian Viliage5 Deluxe (Lardos), Esperides Beach ke 4 * futhi Grecotel Rhodos Royal 4 * (Faliraki). Uma uhlela ukuvakashela Greece amahhotela nezingane kuze kube iminyaka emithathu - kubalulekile ukuya zokungcebeleka of Kalithea futhi Kalimbriya. Ngokusho abahambi, okungcono izingane amahhotela Aldemar Paraduse Mare (5 izinkanyezi), Irene Palace Ihhotela (4 izinkanyezi) kanye Aldemar ePharadesi Village (5-star).
Kubantu abasha best holiday uya khona kuyoba resort of Faliraki. Zonke ezinye Ihhotela likuvumela abahambi abasha nabafundi nge uhlelo ezihlukahlukene zokuzijabulisa. Umculo emigwaqweni resort akusho ukubohla kwaze kwaba sekuseni, ngakho-ke nje into kulabo uhlela ukuchitha iholide lakho noma amaholide ngokushesha.
Esiqhingini kukhona indawo romance. Izithandani uyakhululeka ehhotela resort Ixia, Faliraki Kalafos. Izivakashi eyasala lapho eholidini langemva komshado wabo noma nje iholidi ngokuhlanganyela, ukushiya izibuyekezo omuhle kuphela Greece (Rhodes).
Crete kubhekwa ethandwa kakhulu zonke izindawo resort yaseGrisi. Kunamakhulu ezinkulungwane zezivakashi ukuchitha amaholide abo njalo ngonyaka. Ngaphezu yobuciko edume yezakhiwo kanye namasiko, eKrethe edonsela abahambi nge izinga eliphezulu lokutholakala kwe-nensizakalo amahhotela. Athuthukisiwe ingqalasizinda ehhotela akabashiyi ubani nandaba resort isivakashi. Sunny Crete kufanelekile imikhaya, futhi iholide inkampani ezinomsindo futhi kumnandi enkulu. Lesi siqhingi zonke izimo ngoba kwezinye, futhi abanye. Kwezinye uzothola umoya onokuthula Ukuthanjiswa iholidi ngesiGreki, e abanye - umculo okhalela phezulu futhi kumnandi kwaze kwaba sekuseni. Ngokombono holidaymakers ke kungenziwa baphetha ngokuthi inethiwekhi amahhotela eKrethe izinga ehlukahlukene yenkonzo, ngezilokotho nabasebenzi eziwusizo. Ngokusobala-ke, isiqhingi saseKrethe ithandwe phakathi abalandeli ezokuvakasha ngesiGreki.
Ngokuqondene nazo zonke ezinye esiqhingini Kos, lapha izivakashi bephoqeleka ukuba ukhethe ihhotela kusuka esincane, ngoba amahhotela akukho kangaka. Lokhu singasho sithi endaweni encane yesiqhingi, ngakho mina nje esiqhingini ngokwenyama angeke Ziningi amahhotela. Kodwa naphezu kwalokhu, kukhona kokubili engabizi otelchiki futhi imfashini okunethezeka ehhotela.
On ngci kusukela kwezitaladi ezinomsindo kanye zokungcebeleka ophithizelayo Ibhishi ethule lolwandle-uhlobo amahhotela kwamaholidi umndeni. Futhi leli qoqo leziqhingi Dodecanese ehhotela ngenjabulo uphephele imibhangqwana ufuna ukuba wedwa.
Izivakashi ngokuvamile ukushiya izibuyekezo omuhle Amahhotela Greece (Kos). Ngokuvamile, abahambi lakhomba inani amahhotela bese eluleka abanye ukuba bahlale lapho. Leli hhotela Blue Lagoon, okuyinto ejabulisa izivakashi ukuthula, inkonzo ikhwalithi service lihle; Neptune Amahhotela Resort Gregotel Kos Imperial Thalasso. Lezi amahhotela kukhona okungcono esiqhingini. Nethezeka ezingeni eliphakeme, eseseduze ngenxa kungaba khona.
Halkidiki resort budonsa izivakashi nge indawo yayo engavamile womhlaba - Peninsula liyafana Trident, ogwini ngamunye ukuthi amadolobha abadumile - Athos, Cassandra, Sithonia.
Ngokuvamile lapha ezokungcebeleka abahambi nezingane, umoya onokuthula ukuthula - Isizathu esiyinhloko salokhu ukuthandwa iholidi lomkhaya esiqhingini. Abavakashi beshiya ukubuyekezwa Amahhotela Greece (Halkidiki), wazi iqiniso lokuthi cishe zonke ehhotela itholakala kude ophithizelayo city centre - ogwini. Abanye abahambi bedidwe yokuthi izitolo nezindawo zokudlela ezingenamafutha kwadingeka ukuthi ahambe, kodwa iningi zihamba enhlonhlweni olunothile futhi oluhlaza inikeza injabulo enkulu.
Umholi osobala inani izimpendulo omuhle iyona Ihhotela Ihhotela Potidea Palace Bomo Club. Ihhotela four-star, esemgwaqweni Sithonia, ngemfudumalo ihlangabezana abahambi nezingane, kanye inkampani enkulu futhi enomsindo.
"Emerald" isiqhingi nazo zonke ezinye elite kanye ehloniphekayo. Leli gama livela semali isikhala oluhlaza - lemon orange lezixuku zamafiri izihlahla. De luxe Amahhotela izivakashi abacebile ukuhlangabezana unyaka ngamunye, abangakwazi ukukhokhela ukuhlala ngendlela enkulu. Yiqiniso, kulesi siqhingi kukhona ongakhetha ohlelweni lokusetshenziswa kwemali kakhulu - Bungalows kanye nentsha emakamu.
Labo abangavumelani ncishana futhi babezimisele ukukhokha imali kunalokho enkulu imali vacation, izivakashi belulekwa ukuba bahlale e Grecotel neCorfu Imperial Exclusive kuyona, kanye kule Grecotel Eva Isigodlo noma Kontokali Bay Resort & Spa. Ihhotela izakhiwo zitholakala ogwini loLwandle Ionian, coves ethule ukuvumela ukuba baphumule lapha nomndeni wonke. Ukubuyekezwa (Greece) neCorfu iningi futhi omuhle.
Mykonos bezilokhu kubhekwe indawo bohemia samaholide, ngakho inani layo likwenza ubone impela high. Inombolo izakhiwo ku lesi siqhingi sisincane, ngakho ubhukhe igumbi ungcono kwezinyanga ezimbalwa. Ngokuphathelene esigabeni, it is kakhulu ubuswa amahhotela lapha 4 no-5 izinkanyezi, kodwa ungathola ongakhetha ohlelweni lokusetshenziswa kwemali kakhulu.
Samos esiqhingini izivakashi nge amabhishi onokuthula ehlanzekile ithuba ukuchitha amaholide abo wedwa. Samos amahhotela zitholakala eduze izindawo ezisezintabeni izivakashi bangavakashela uma ufuna. Izibuyekezo Jikelele waseSamos Greece, ngokuvamile omuhle, kodwa futhi kukhona omubi. Ngokwesibonelo, abanye abahambi e Samos nakanjani akakuthandanga ebhishi itshana noma phansi olwandle. Kodwa-ke asikwazi kubhekwe sesimeni lesibucayi, ngoba wonke umuntu ekhetha ihhotela ezisuselwa izingqondo nezifiso zabo. Njengoba for the service, cishe wonke amahhotela Samos kungaba ngizibonge nasezingeni eliphezulu of service.
iseluleko Jikelele yokuthola ihhotela engcono
Into yokuqala ukucabangela lapho ekhetha ihhotela - Nanku umumo wezinkanyezi amahhotela. Hhayi ngaso sonke isikhathi 4 star hotel okubi kakhulu aphambili. Ngokuvamile abanikazi amahhotela nje musa ukuxosha isimo, kepha isevisi nokuzijabulisa lapho "ezinhlanu-plus." Holiday-abenzi ezivela eRussia akufanele sikhohlwe ukuthi iGrisi ikakhulu ekubaleni izivakashi European, ngakho ukunakekelwa okukhethekile kufanele ikhokhwe yokubakhona abasebenzi abakhuluma isiRashiya ehhotela. Lungahlangabezani Bakwethu emahhotela Crete - Grecotel Amirandes, Domes ka Elounda noma Kalimera Kriti. Amahhotela Book kusengaphambili. Cishe wonke amahhotela ngesiGreki usebenza ohlelweni "zonke okufakayo", isethi kahle amasevisi zingatholakala ehhotela eCandia Park Village (eKrethe), kanye nabanye.
Izibuyekezo mayelana namahhotela ase Greece zihlukile, ngakho ngaphambi uya udinga ukuhlola ngolwazi tour operator ukutholakala kwemisebenzi ethile ukuthi abaluleke kakhulu kuwe.
Paphiessa Ihhotela 3 * (Cyprus, ePhafu): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Ihhotela "Intourist" (Brest, Belarus): incazelo, inombolo, izici kanye nokubuyekeza
Imishwana Ibizo ne Ibizo ngesiRashiya: izibonelo
Umdlali wasesiswini Spanish Denis Suarez
Njengoba LG kabusha kumasethingi factory: imihlahlandlela kanye nezincomo